Maxaa loo jecelyahay cunista basbaaska aadka u kulul? | YoobsanNews.com
Sannadkii hore, dhakhaatiir ka hawl galayey qaybta adeegga degdega ah ee isbitaal ku yaal Maraykanka, waxay aad ugu mashquuleen in ay ogaadaan waxa hayey nin isbitaalka yimid oo ka cabanayey xanuun ba’an oo aad moodo in madaxiisa “dab lagu shidayo”, qoortu xanuunaysay qandho badanina haysay.
Basbaaskaa uu cunay waxa la yidhaa “Carolina Reaper” (275 goor ayuu ka kulul yahay basbaaska caadiga ah. Ninkaas oo da’diisu ahayd 34 sano jir wuxuu go’aansaday inuu cuno oo tartan uu ku galo.
Arrintaa waxay noqon kartaa tusaale xad dhaafa, laakiin malaayiin qof – ama suurto galna ay tahay – balaayiin qof oo dunida ku nool ayaa si joogto ah u cuna cunto basbaas leh oo carrabka ka gubta, oo mararka qaarna qofka uu si degdeg ah u doonto cabitaan uu isku qaboojiyo ama ay xataa caloosha ka gubato. Sababtu maxay tahay?
Image captionSi ka duwan cayayaanka kale, shimbiraha dhib kuma qabaan in ay cunaan basbaaska.
Caloosha xaywaannada waxay baabi’isaa wixii ay cunaan, waxayna ka ilaalisaa jeermiska.
Laakiin shimbiraha sidaa ma ahan arrintooda – miraha waxay maraan calooshooda iyagoo aan burburin, marka ay ka soo baxaanna dib ayay u dhalan karaan mirahaas.
Waxaa layaab noqotay in bini-aadamka lala xiriiriyay dhadhanka qaraar ee ku milan sunta – taas waxay qeyb ka tahay farsamooyiinka is badbaadinta maskaxda.
Fikradda waxay tahay in dadka ay billaabeen in ay gartaan dhedheminta cuntada basbaaska leh ayna u badan tahay in aysan qurmin – Kuleylka wuxuu noqon karaa astaanta sababtay in cuntadaas aysan hallaabin.
“Dalalka kulul, cunta kastoo hilib ah waxaa lagu daraa ugu yaraan hal nooc oo wax kulul oo basbaas ah, halka dalalka qabow ay u kala qeybsan yihiin kuwo basbaaska ku darsada iyo kuwa aan ku darin,” ayey warbixintooda ku soo afjareen.
Si kastaba, waxaa jiro fikrado loolamaya oo la xiriira sharaxaadda sida aan u jecelnahay basbaaska: Xiriirka aan la wadaagno basbaaska wuxuu sababay waxa loo garanayo “halista xadidan”.
“Bibi-aadamka waa noolaha keli ah ee ku naalooda waxa aan wanaagsanayn,” ayuu yiri Rozin.
“Maskaxdeena waxay baratay in ay isu sheegto in halis aysan jirin xitaa haddii jirka uu sidaa dareemayo oo falcelin aad uga duwan uu bixinayo.”
“Mexico, tusaale ahaan, cunidda basbaaska waxaa lala xiriiriyaa awood, geesinimo, iyo murqo-weynin iyo astaamo shaqsiyadeed,” ayey tiri Byrnes.
Previous: Magaalo ay gawaarideeda kala hagaan boombaleyaal dalka Hindiya
Next: Abiy oo cambaareeyey kuwa ‘nacyebka ku dhex fidinaya’ Itoobiya